Distrikan’Antanifotsy: tokantrano 7150 misitraka ny tetikasa Asa avotra mirindra | NewsMada
Distrikan’Antanifotsy: tokantrano 7150 misitraka ny tetikasa Asa avotra mirindra
Hiditra amin’ny andiany fahadimy ny sahanasa amin’ny tetikasa Asa avoitra mirindra ary mbola misy asa roa hatramin’ny fiafaran’ny tetikasa, ny volana jolay ho avy izao. Tohana ho an’ny vondron’olona marefo amin’ny alalan’ny fanatanterahana asa sandaina vola ny tetikasa. Dimy ny distrika niompanany : Ankazoabo, Vatomandry, Isandra, Manakara ary Antanifotsy izay manana taha ambony amin’ny fahantrana, araka ny fanazavan’ny tale jeneraly mpisolo toerana, Rajao Harilala Serge, tany Antanifotsy tamin’ity herinandro ity. Ho an’ny distrikan’Antanifotsy, 7 150 ny mpisitraka ny tetikasa miparitaka amin’ny fokontany 96 ao anatin’ny kaominina 11. Efa nanomboka ny taona 2016 ny tetikasa ary tontosa ny asa efatra amin’ny tontolo ivelomana 66 anatin’ny sahanasa 18. Manatanteraka ny tetikasa ny Fonds d’Intervention pour le développement(Fid), mandrindra sy manara-maso ny fizotry ny tetikasa ny minisiteran’ny Mponina sy ny fiahiana sosialy.
Mikambana ao anaty vondrona ny mpiray monina anaty fokontany iray ary miara-manao asa. 40 andro ny faharetan’ny asa sandaina vola 4 000 Ar isan’andro manomboka amin’ny 5 ora ka hatramin’ny 12 ora antoandro. 60 ka hatramin’ny 150 ny olona isam-bondrona. Tanjon’ny asa ny fiarovana ny tontolo iainana amin’ny famokarana zanakazo, fametrahana tohodrano madinika, fanaovana dobo trondro, fanamboarana zezika « composte ». Ho an’ny mpisitraka, mampivoatra ny fari-piainan’izy ireo ny fisian’ny tetikasa Asa avotra mirindra satria manampy amin’ny fampidirana an-tsekoly ny zaza any an-dakilasy ny vola no ahafahana manosika ny fambolena sy ny fiompiana fivelomana.14 tapitrisa mahery Ar ny sorabola nanatanterahana ny tetikasam-panjakana fa nanohana kosa ny Banky iraisam-pirenena.
Ankoatra ny tetikasa, misy koa ny fampiofanana amin’ny fitantanam-bola sy fahadiovana, ny fiainam-bondrona ary ny Voamami ahafahan’ny samy mpisitraka mifampindram-bola.
Ho fanohizana ny tetikasa, nanome 90 tapitrisa dolara ny Banky iraisam-pirenena ahafahana manao asa, hatramin’ny faran’ny taona, ary mety hitarina amin’ny distrika hafa ihany koa.
Notolorana loka ny vondrona nanana asa mendrika sy ny vondrona nanana zotom-po tamin’ny fanatanterahana ny sahanasa nataony. Tao amin’ny fokontany Ambatoboka Saonjorano no nahazo ny sokajy voalohany ary avy any Antsahamaina kosa ny faharoa. Notolorana fitaovana ahafahana manatsara ny asa fambolena mananasy sy zanakazo avokoa izy ireo miampy masom-boly. Nanampy tamin’ny lafiny teknika ny tantsaha teny ifotony ny ONG Miasa sy ny YMCA.